I Paoly sy ireo kristianina tany Galatia (Gal. 1:1-12)
Telovolana fahaefatra : Voavonjy amin'ny alalan'ny finoana irery ihany. Ny bokin'ny Romanina
Lesona 2: Ilay fifandirana
Catégorie parente: Telovolana fahaefatra : Voavonjy amin'ny alalan'ny finoana irery ihany. Ny bokin'ny Romanina
Catégorie : Lesona 2: Ilay fifandirana
Mazava ny nambaran’ny fiangonana mikasika izay tokony hataon’ny mpino Jentilisa sy izay tsy tokony hataony, saingy mbola nisy mambran’ny fiangonana ihany nanery ireo Jentilisa hanaraka ireo finoana Jiosy izay nampitaina avy tamin’ireo razambeny taloha. Tsapan’i Paoly fa izany fampianarana izany dia nanohitra ny filazantsaran’i Jesôsy.
Araka izay hita ao amin’ny Gal. 1:1-12, inona no olana tany Galatia? Manao ahoana ny fahatsapan’i Paoly ny maha-lehibe izany olana izany?
Efa hitantsika fa izany olana tany Galatia izany no ampahany lehibe nahatonga an’i Paoly hanoratra ny epistiliny ho an’ny Rômanina. Ireo mpampianatra sandoka tany Galatia dia niady hevitra fa ny lalàna izay nomen’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Mosesy dia tokony harahin’ireo mpino Jentilisa. Tsy tian’i Paoly hifehy an’i Rôma ireo mpampianatra sandoka ireo, tahaka izay nataony tany Galatia. Noho izany antony izany, dia tian’i Paoly ny haneho amin’ny Rômanina ny tena tanjon’ny lalàna.
Mety hisy hanontany hoe lalàna inona no resahin’i Paoly ao amin’ny Galatianina sy ny Rômanina. Moa ve ny lalàna taloha izay manazava ny fampiasana biby amin’ny fanompoam-pivavahana, sa ny Didy Folo izany? Mora loatra anefa izany fanontaniana izany. Haingana sy tsotra ny valinteny izay tsy mahakasika ny toe-javatra rehetra momba ny olan’ny lalàna resahin’i Paoly. Mahatonga tsy fahatakarana ny tanjon’ny lalàna izany. Ny olana natrehin’i Paoly tany Rôma dia mikasika izay tokony hataon’ireo mpino Jentilisa mba hahatonga azy ho isan’ny fiangonana. Tokony hasaina manaraka ny fomba Jiosy sy ny lalàny ve izy ireo? Tsia no valiny.
Amin’izao fotoana izao, ny Kristianina dia mbola miady hevitra hatrany ny amin’izay lalàna tokony harahina. Ny sasany, ohatra, dia mahita fa ireo epistilin’i Paoly anankiroa dia porofo maneho fa tsy ilain’ny Kristianina intsony ny mankatò ny Didy Folo. Lazain’izy ireo fa tsy ilaina intsony ny mitandrina ny Sabata ho masina. Diso anefa ny fahatakaran’ireo olona ireo ny zavatra nosoratan’i Paoly. Nampianarin’i Paoly fa ny finoana ihany no mahavonjy, tsy mamonjy antsika ny fankatoavan-dalàna, saingy ny fitenenana izany dia tsy mitovy amin’ny fampianarana fa tokony hariana ny Didy Folo. Tsy nisy fisalasalana mihitsy tao an-tsain’i Paoly ny amin’ny tokony hankatoavana izany. Amin’izao fotoana izao, dia diso hevitra tanteraka ireo izay mihevitra fa nofoanan’i Paoly ny Didy Folo. Mamaky hevitra ao amin’ny taratasiny, izay tsy nambarany akory izy ireo.
Inona no avalinao ireo izay milaza fa tsy ilain’ny Kristianina intsony ny mitandrina ny Sabata? Ahoana no anehoanao ny maha-zava-dehibe ny fanamasinana izany kanefa tsy manohitra ny fahamarinan’ny filazantsara izay manambara fa ny finoana irery ihany no mahavonjy?
In Dubai, health message becomes more critical than money
Local church shares the health message through a free health service
© 2017 MALINA